Laba Goobood oo ku yaalla Afrika oo Weliba Yurub leedahay | Qaran News
Laba Goobood oo ku yaalla Afrika oo Weliba Yurub leedahay
Writen by Qaran News | 11:48 am 6th Jun, 2021
Reer Morocco waxay ugu yeeraan “Sebtah iyo Melilah”. Dunida inteeda kalana waxay u garanayaan inay yihiin xayndaabyadii Spain ee Ceuta iyo Melilla ee Waqooyiga Afrika.
Waa labada goobood ee kaliga ah ee Yurub laga leeyahay oo ku yaalla Afrika– taasoo ah xaqiiqo siyaaasadeed iyo mid sharci oo haseyeeshee ay Moroko aysan aqoonsanayn iyadoo dalabaneysa in jasiiradahaasi iyaga gacantooda lagu soo celiyo.
Bishii la soo dhaafay, tiro aad u badan oo muhaajiriin ah ayaa ka soo tallaabay xadka hal maalin gudaheed kuwaas oo gaarayay 8,000, oo u badan reer Morocco. Waxaa kale oo soo baxay in ilaalada xuduudda Marooko ay indhaha ka qarsadeen arrintaan oo ah jabin sharci.
Dhacdadan ayaa si deg deg ah ugu xuub siibatay xiisad diblomaasiyadeed oo u dhaxeysa Spain iyo Morocco, taas oo dhalisay in dowladda Spain ay u dirto ciidamo ay ku xoojinayso dhulalkaas isla markaana raiisel wasaare Pedro Sanchez uu ku sifeeyo inay tahay arrintaan “dhibaato aan horay loo arag oo sanadihii la soo dhaafay u dhaxeysay Midowga Yurub iyo Morocco.
Maaddaama ay dhibaatadaan soo ifbaxday, dadka reer Morocco waxay olole ka bilaabeen barta Twitter-ka, waxaana ay halkudhegyo ay uga dhigeen : “Ceuta iyo Melilla Spain ma ahan” iyo “Ceuta iyo Melilla waa Morocco – gumeysigii dhamaay”.
Ciidamada Ispain oo ku howlan xakameynta muhaajiriinta ee Ceuta iyo Melilla
Warbaahinta Carabta ayaa warbixino ka qoray dhacdoyin fool xun oo ka dhacay gudaha Ceuta oo muujinayay rabshado udhaxeeya mudaharaadayaasha Spain ee diidan tahriibka iyo haweenka Muslimiinta ah ee asalkoodu yahay Morocco-kaan. Qof ayaa bartiisa Twitter-ka ku soo qoray “kuwaani muhaajiriin maaha waxay joogaan dalkooda”
Spain, sida dalalka kale badankood, waligeed ma aqoonsan sheegashada Morocco ee dhulkaas. Maxkamad ay Spain leedahay ayaa Talaadadii diiday inay amarto in la xiro Mr Ghali oo u ololeeyanaha madax banaanida jasiiradahaasi iyadoo lagu eedeeyay dambiyo dagaal maadama sida ay sheegtay maxakamddu aan caddeyn loo haynin dambiyada lagu eedeyay.
Balse waxaa jirta gudaha Morocco arrin dadku ka mideysanyihiin ah oo ah in dhulka galbeedka Saxaraha sida ay u aaminsanyihiin in Morocco uu ka mid yahay ay aaminsanyihiin in Ceuta iyo Melilla yihiin dhulkooda. Ka hadalka xaaladda labada magaalo ayaa isa soo tarayay xilliyadii dambe gaa rahaanna marka ay soo kordheen xaaladaha tahriibka. Sheegashada Moroccan ee dhulka ayaa u muuqata mid micno sameynaysa.Degaannada ayaa ku yaalla ciida Afrika, halka Spain-na ay ku taallo Yurub. Waxay u egtahay xaalad tusaale cad u ah gumeysigii reer Yurub.
Xasuustii bahdilkii loo gaystay Muslimiinta
Carabtu waxay ku tilmaameen magaalada Ceuta in ay qabsadeen Muslimiinta jasiiraddii Iberia qarnigii 8-aad.Dekedaha dib ayaa looga qabsaday goor dambe waxaa loo yaqaan ‘Reconquista’ waa ololihii millatari ee looga saaray Muslimiinta halka hadda loo yaqaan Spain iyo Boortaqiiska.
Melilla waxaa qabsaday Spain qarnigii 15-aad – isla mudadaas Christopher Columbus wuxuu sahan u aaday Mareykanka wuxuuna wadada u xaarayay gunaanadkii gumeysigii reer Yurub ee Waqooyiga iyo Koonfurta Mareykanka . Waxay ku hoos jirtay gacanta Spain qarnigii 16-aad. Dadka Muslimiinta ah, ee Ceuta iyo Melilla waxay u tahay xusuus xanuun badan jabkii iyo bahdilkii Muslimiinta ee ay kula kaceen saraakiishii reer galbeedka iyo kuwii Masiixiyiinta ahaa.
“Waa dhul Muslim inta ay arrintu sii socotana ,waa nabar duug ah oo dadka qaar ay u maleynayaan inuu bogsaday, balse wuxuu sii wadaa dhiig baxa mana jirto daawo kale oo aan ka aheyn dib u qabsashada,” waxaa sidaa dareenkaas ku daabacay mid ka mid warbaahinta Carabta.
Dagaalyahanno reer Morocco ah oo Isbaanishka kula diriray 1909 agagaarka Melilla
Xitaa Shabakadda Wikipedia ayaa ku tilmaantay labadaan magaalo in ay yihiin magaallooyin ka tirsan dalka Morocco balse ay Spain maamusho. Si kastaba ha noqotee, inkasta oo Morocco ay dagaal u gashay inay qabsato Galbeedka Saxaraha ka dib markii Isbaanishku faaruqiyeen dhulkaas sanadkii 1975, hadafkoodii ahaa inay dib ula wareegaan gacan ku haynta Ceuta iyo Melilla waxay ahayd tii ugu fiicnayd. Morocco waxay ku fashilantay in ay arrintaas si caalami ah u wajahdo .
Xayndaab ayaa kala qaybiya Melilla iyo Morocco ,Yurub iyo Afrika
Xiligaan la joogo oo maanta ah Spain waxay gabi ahaanba diiday in wada hadal kasta iyo gorgortan laga galo labada magaalo, waxayna ku adkeysaneysaa inay Spain leedahay magaalooyinkaan muddo shan qarni ka badan. Balse Mr Bennis wuxuu su’aal ka keenay sheegashada Spain ma tahay mid ku saleysan taariikh iyo sharci .